စွဲလမ်းဆေးပညာများအတွက်အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း: စွဲမှု၏အဓိပ္ပာယ် - Long ကဗားရှင်း။ (2011) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
အမေရိကန်ဆေးစွဲလမ်းမှုဆေးစွဲ - အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက် - ရှည်လျားသောဘာသာပြန်ကျမ်း။ (၂၀၁၁)
comments: ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ASAM“ စွဲလမ်းမှုနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်” (၂၀၁၁ သြဂုတ်လ) သည်လိင်နှင့် porn စွဲလမ်းမှုအပါအ ၀ င်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်။ အစားအစာ၊ လောင်းကစားနှင့်လိင်စသည့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများပါဝင်သည့်စွဲလမ်းမှု၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရအမူအကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့အလားတူ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းများပါ ၀ င်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုလိင်စွဲလမ်းမှုအောက်တွင်မထားသင့်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုစွဲနေသောအမျိုးသားအများစုသည်အင်တာနက်မတိုင်မီကအသက်ရှင်ခဲ့ပါကလိင်စွဲလမ်းသူများဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ (ကျွန်ုပ်သည်တိကျသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုရည်ညွှန်းထားသည့်ကိုးကားချက်များရှိသည်။ )
UPDATE (2013) - စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားသိပ္ပံ (NIMH): DSM ချို့ယွင်းချက်များနှင့်ခေတ်မမီတော့ဖြစ်ပါတယ်။
UPDATE (2016) - သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်စက္ကူ DSM-5 လိင်အလုပ်အဖွဲ့ကိုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရစ်ချတ် Krueger MD: hypersexual သို့မဟုတ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအမေရိကန်စိတ်ရောဂါ Association ကဒီရောဂါ၏ငြင်းပယ်ခံရရှိနေသော်လည်း ICD-10 နှင့် DSM-5 သုံးပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်
UPDATE (2018) - တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကို? ကမ္ဘာ့အများဆုံးအသုံးများဆေးပညာဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေလက်စွဲ, ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn စွဲသို့မဟုတ်လိင်စွဲလမ်းများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "(2018)
အဆိုပါ ASAM က်ဘ်ဆိုက်မှ Link ကို
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပေါ် ASAM ၏မကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းများ - ASAM ၏စွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် - မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ (၂၀၁၁)
အသစ်သောအဓိပ်ပါယျအပေါ် ASAM သတင်းထုတ်ပြန်ချက်: ASAM သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (2011)
အဓိပ္ပါယ်နှင့်မူဝါဒကြေညာချက်တခုတခုအပေါ်မှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆောင်းပါး: အမေရိက၏ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူများ (ASAM) သည်စွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပာယ်သစ် (၂၀၁၁) ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
2011 ထံမှ YBOP အားဖြင့်နှစ်ဦးကဆောင်းပါးများ:
သင့်ရဲ့ဖတ်စာအုပ်များဆမ်း: Docs လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲ (2011) ကြမယ်,. စွဲလမ်းဆေးပညာအမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း DSM သဘောမတူရန်သဘောတူ
သင်က Porn အပေါ်ချိတ်ဆက်ပါသလား? ASAM (2011) မေးပါ. porn အသုံးပြုသူများသည်ကချိတ်ဆက်ခံရဖို့နဲ့တူရဲ့အဘယ်အရာကိုဖော်ပြရန်
အဆိုပါ DSM များအတွက်လိုင်း၏အဆုံး:
ပြည်သူ့ပေါ်လစီထုတ်ပြန်ချက်: စွဲမှု၏အဓိပ္ပာယ် (Long ကဗားရှင်း)
စွဲသည်အဓိကအားဖြင့်နာတာရှည် ဦး နှောက်ဆု၊ စွဲခြင်းဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများအပါအ ၀ င်အသည်းနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတို့ပါ ၀ င်နိုင်သည့်စွဲလမ်းမှုသည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်တည်ဆောက်ပုံများအတွင်းရှိအာရုံကြောကူးစက်မှုနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ , Self- စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူ။ [နှင့်] စွဲသည် neurotransmission နှင့် cortical နှင့် hippocampal circuits များနှင့် ဦး နှောက်ဆုချသည့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတို့အကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာ, လိင်, အဖြစ် အရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ) အလှည့်ထဲမှာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်တဏှာနှင့် / သို့မဟုတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုထွက်လာပါတယ်, ပြင်ပတွေကိုတစ်ဇီဝဗေဒနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုစေပါတယ်။
စွဲလမ်းမှု၏ neurobiology သည် neurochemistry ထက်ပိုမိုသောဆုကိုရရှိသည်။ (၁) ဦး နှောက်၏တိုကျရိုကျ cortex နှင့်အဖြူရောင်အမှုန်များ၏ဆက်စပ်မှုများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်များအကြားအခြေခံအချက်များသည် Impulse Control ၏ပြောင်းလဲမှု၊ နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အခြားစွဲလမ်းအပြုအမူများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမှကြုံတွေ့တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များကိုတွေ့မြင် - ("ပုံမှန်ဖြစ်ချင်သောဆန္ဒရှိသကဲ့သို့ဘေးဒဏ်သင့်သူလူတစ် ဦး အတွေ့အကြုံများသောအရာ) ဆုလာဘ်များ၏အလုပ်မဖြစ်လိုက်ရှာ, စွဲ၌တွေ့မြင်
တိုကျရိုကျသောအမြှေးသည်ထကြွလွယ်သောအရာများအားတားဆီးရန်နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီအားကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုကိုနောက်ကျရန်ကူညီပေးရာတွင်အရေးကြီးသည်။ စွဲနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များဆန္ဒပြည့်ဆိုင်းငံ့အတွက်ပြproblemsနာများကိုထင်ရှားစွာပြသောအခါ, ထိုပြproblemsနာများ၏အာရုံကြော locus အဆိုပါတိုကျရိုကျ cortex အတွက်ရှိသေး၏။ အသည်းပေါ်၌ရှိသောအမြှေး shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်, ဆက်သွယ်မှုနှင့်လည်ပတ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်ငယ်ရွယ်သောလူကြီးစဉ်အတွင်းရင့်ကျက်၏လုပ်ငန်းစဉ်တွင်နေဆဲနှင့်စွဲစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နောက်ထပ်သိသာထင်ရှားသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်သည်အရာ ၀ တ္ထုများနှင့်ငယ်ဘဝကိုထိတွေ့စေသည့်အခြေခံအကြောင်းတရားဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
မျိုးရိုးဗီဇအချက်များတစ်ဦးချင်းစွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မည်ကိုဖြစ်နိုင်ခြေကိုထက်ဝက်ခန့်များအတွက်အကောင့်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအချက်များလူတစ်ဦးရဲ့ဇီဝဗေဒနှင့်အတူအပြန်အလှန်နဲ့အရာမျိုးဗီဇအချက်များဟာသူတို့ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုမှအတိုင်းအတာအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ (မိဘအုပ်ထိန်းသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းဘဝအတွေ့အကြုံများမှတဆင့်) ကိုတစ်ဦးချင်းစီရယူရာမျိုးဗီဇစွဲများ၏အမူအကျင့်များနှင့်အခြားသရုပ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်အတိုင်းအတာထိခိုကျနိုငျ Resiliencies ။ ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းစွဲလမ်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဇီဝအားနည်းချက်များနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် actualized စွဲဖြစ်လာဘယ်လိုတစ်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။
တစ်ဦး။ ဆုလာဘ် function ကိုမြှင့်တင်ရန်ထားတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အပြုအမူစစ်ကူအဖြစ်ပိုမိုနှစ်သက်ခြင်းနှင့်အလွန်ရှာဖွေကြသည်ထိုကဲ့သို့သောကြောင်းဆုလာဘ်ဆားကစ်၏ function ကိုတစ်ခုနောက်ခံဇီဝလိုငွေပြမှု၏ရှေ့မှောက်တွင်;
ခ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေအတွက်နောက်ထပ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသို့မဟုတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုကျော်ချို့ယွင်းထိန်းချုပ်မှုမှဦးဆောင်စိတ်ခွန်အားနိုး circuitry အတွက် neuroadaptation ဖြစ်စေတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများသို့မဟုတ်အခြားစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ဆက်ဆံမှု,
က c ။ သဘောထားအမြင်အယှက်များနှင့်သိသိသာသာ Self-လှည့်စားမှုခံစားချက်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းအလျှော့ပေးလိုက်လျောထားတဲ့သိမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေပျက်ယွင်း,
အီး။ စိတ်ဒဏ်ရာသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းရဲ့ဖြေရှင်းစွမ်းရည်ကိုလွှမ်းမိုးသည်ဟုဖိအား exposure;
f ။ အဓိပ်ပာယျ Distortion, ရည်ရွယ်ချက်နှင့်သဘောထားများကိုလမ်းပြသောအတန်ဖိုးများ, စဉ်းစားတွေးခေါ်နဲ့အပြုအမူ;
ဆ။ အခြားသူများနှင့်နှင့် TRANSCEND (12-ခြေလှမ်းများအားဖြင့်များစွာသောအဆိုပါအဆင့်မြင့်ပါဝါအုပ်စုများအားဖြင့်ဘုရားသခင်အဖြစ်ရည်ညွှန်း, သို့မဟုတ်အခြားသူများအားဖြင့်မြင့်မားသောသိစိတ်) နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ဆက်သွယ်မှုအတွက်ပျက်ယွင်း, နှင့်
ဇ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အခြားစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူကိုလူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် Co-ဖြစ်ပေါ်စိတ်ရောဂါမမှန်၏ရှေ့မှောက်တွင်။
စွဲလမ်း (အောက်တွင် #2 ကိုကြည့်ပါ) ABCDE ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်:
က c ။ တဏှာ; သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အကြိုးအတွေ့အကြုံများကိုအတွက် "ဆာလောင်မွတ်သိပ်" တိုးတက်သဖြင့်,
ဃ။ တဦးတည်းရဲ့အပြုအမူတွေနဲ့လူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူအရေးပါသောပြဿနာများ၏လျော့နည်းသွားအသိအမှတ်ပြုမှု; နှင့်
တဏှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပေါ်ဖို့အဖြစ်ကအခြားအလားအလာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏ကြိမ်နှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့ပြင်ပတွေကိုပါဝါ, အ hippocampus ယခင်ပျော်ရွှင်ဖွယ်သို့မဟုတ် dysphoric အတွေ့အကြုံများ၏မှတ်ဉာဏ်အတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူကိုလည်းစွဲလမ်းတဲ့ဝိသေသဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါ amygdala ကဤအတိတ်အတွေ့အကြုံများနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေကိုရွေးချယ်ခြင်းအပေါ်လှုံ့ဆျောမှုအာရုံရှိခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ခြင်း။
အချို့သောစွဲရှိသူတို့နှင့်မကျင့်သောသူတို့ကိုလည်းအကြားခြားနားချက်, အရက် / မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏အရေအတွက်သို့မဟုတ်ကြိမ်နှုန်းကြောင်း, ယုံကြည်ပေမယ့် (ထိုကဲ့သို့သောလောင်းကစားဝိုင်းသို့မဟုတ်အသုံးစရိတ်ကဲ့သို့) စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု (3), သို့မဟုတ် (ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာသို့မဟုတ်လိင်ကဲ့သို့) အခြားသောပြင်ပဆုလာဘ်မှထိတွေ့မှု, စွဲလမ်းတဲ့ဝိသေသရှုထောင့်တစ်ဦးချင်းစီထိုကဲ့သို့သောထိတွေ့မှု, ဖိအားနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုတုံ့ပြန်မှုထားတဲ့အတွက်အရည်အသွေးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ စွဲလမ်းနှင့်အတူလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူစွဲ, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်ပဆုလာဘ်နဲ့အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်မှီအောင်လိုက်နှင့် / သို့မဟုတ်ဆုလာဘ် (ဥပမာအရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု) ၏လိုက်စားဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ၏စုဆောင်းခြင်းကြားမှဆက်လက်ရှိသောလမ်းတစ်ဦးကအထူးသဖြင့်ရောဂါဗေဒရှုထောင့်။ ဤရွေ့ကားသရုပ်ချို့ယွင်းထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုရောင်ပြန်ဟပ်မှုအဖြစ်လုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်သို့မဟုတ် Impulse ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
persistent အန္တရာယ်နှင့် / သို့မဟုတ် relapse ၏ထပ်မဖြစ်အောင်, abstinence ၏ကာလပြီးနောက်, စွဲလမ်း၏အခြားအခြေခံ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုအသုံးပြုရန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုထိတွေ့အသုံးပြုပုံနှင့်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်အတွက်မြင့်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်ကြောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားထိတွေ့အသုံးပြုပုံကြိုးတ္ထုများနှင့်အပြုအမူမှထိတွေ့မှုအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ (4)
စွဲလမ်းအတွက်အမြင်, သင်ယူမှု, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်, compulsive နှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုနှင့်အတူပြဿနာများအတွက်တငျပွထားတဲ့အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်သိသာထင်ရှားသောချို့ယွင်းလျက်ရှိ၏။ စွဲလမ်းနှင့်အတူပြည်သူ့မကြာခဏသူတို့ဘဝအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခြားသူများထုတ်ဖော်ပြောဆို mounting စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့၏အလုပ်မဖြစ်အပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်တစ်ဦးအနိမ့်အဆင်သင့်ကိုထင်ရှားစွာပြ; နှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပြဿနာတွေနဲ့ပြဿနာများ၏ပြင်းအား၏ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတစ်ခုသိသာမရှိခြင်းဖော်ပြရန်။ အဆိုပါနေဆဲနှစ်ဦးစလုံးဝင်းအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ဤလိုငွေပြမှု may နှင့်အရက်သို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမြားတှငျပါဝငျခွငျးအပါအဝငျ "မြင့်သောစွန့်စားမှု" အပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လူငယ်တွေကို predispose မြီးကောင်ပေါက်များ၏တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ စွဲလမ်းနှင့်အတူအများအပြားလူနာတွင်တွေ့မြင်သောလေးနက် drive ကိုသို့မဟုတ်တဏှာတ္ထုများကိုသုံးပါသို့မဟုတ်ပုံအကြိုးအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့, ဤရောဂါ၏ compulsive သို့မဟုတ် avolitional ရှုထောင့်အလေးပေး။ 1 ခြေလှမ်းများအစီအစဉ်များ၏အဆင့် 12 တှငျဖျောပွထားသကဲ့သို့ဤစွဲလမ်းနှင့်အသက်တာ၏ "စီမံထားခြင်းမရှိသော" ကျော် "ခိုးမရှိဘူး" နဲ့ဆက်သွယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
စွဲနေတဲ့အမူအကျင့်ရောဂါထက်ပိုပါတယ်။ စွဲလမ်း၏အင်္ဂါရပ်များဟာသူတို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များရန်, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်မှ, သူတို့၏နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရမှာတွေအရာမှ၎င်းတို့၏မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များမှပြန်ပြောပြဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းအပါအဝင်လူတစ်ဦး၏အပြုအမူ၏ရှုထောင့်, သိမြင်မှု, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်အခြားသူများနှင့် interaction က, ပါဝင်သည် အတှေ့အကွုံ။
တစ်ဦး။ မကြာခဏအဘို့မြဲအလိုဆန္ဒနှင့်အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုမှာမအောင်မြင်ကြိုးစားမှုနဲ့ဆက်စပ်ရည်ရွယ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထက်ပိုမိုမြင့်မားကြိမ်နှုန်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပမာဏမှာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု,
ခ။ အလွန်အကျွံအချိန်ဥစ္စာအသုံးပြုမှုအတွက်ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်လူမှုရေးနှင့်လုပ်ငန်းခွင်လည်ပတ်အပေါ်သိသာထင်ရှားသောဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုနှင့်အတူစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအနေဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင် (ဥပမာလူ့ကြားဆက်ဆံရေးပြဿနာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာသို့မဟုတ် home, ကျောင်းသို့မဟုတ်အလုပ်မှာတာဝနျမြား၏လျစ်လျူရှု );
က c ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ် related စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားခဲ့ကြရသောမြဲသို့မဟုတ်မှုများထပ်တလဲလဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှိနေသော်လည်းစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆက်လက်;
ဃ။ စွဲလမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဆုလာဘ်အာရုံစိုက်သည့်အမူအကျင့် repertoire ၏တစ်ဦးကကျဉ်း; နှင့်
အီး။ စွမ်းရည်နှင့် / သို့မဟုတ်ပြဿနာများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုရှိနေသော်လည်းတသမတ်တည်း, ameliorative အရေးယူဖို့အသငျ့တစ်ခုသိသာမရှိခြင်း။
ခ။ မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အကြိုးအပြုအမူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆွေမျိုးအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ထိခိုက်၏ပြောင်းလဲအကဲဖြတ်; နှင့်
က c ။ တဦးတည်းရဲ့အသက်တာ၌တွေ့ကြုံပြဿနာများမဟုတ်ဘဲစွဲတစ်ဦးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းအကျိုးဆက်ဖြစ်ခြင်းထက်အခြားအကြောင်းတရားများမှအကျိုးဆက်ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းယင်းတိယုံကြည်ချက်။
တစ်ဦး။ တိုးမြှင့်စိုးရိမ်စိတ်, dysphoria နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှု;
ခ။ ရလဒ်အဖြစ် "အမှုအရာထက်ပိုစိတ်ဖိစီးမှုပုံရသည်" ဒီလိုကြောင့်ဦးနှောက်ကိုဖိစီးစနစ်များ၏စုဆောင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်ဖိအားတိုးလာ sensitivity ကို, နှင့်
က c ။ , ခံစားချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ခံစားချက်တွေကိုနှင့်စိတ်ခံစားမှု arousal ၏ခန္ဓာကိုယ်အာရုံအကြားကွဲပြားခြားနားသွားနှင့်အခြားလူ (တစ်ခါတစ်ရံ alexithymia အဖြစ်ရည်ညွှန်း) ကိုခံစားခကျြကိုဖော်ပြအတွက်အခက်အခဲ။
စွဲလမ်းမှု၏စိတ်ခံစားမှုရှုထောင့်ကအတော်လေးရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်။ တချို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်များအရက်သို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသုံးပါသို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒသူတို့ "အပြုသဘောအားကောင်း" သို့မဟုတ်တစ်ဦးအပြုသဘောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ် ( "Euphoria ပီတိ") ၏ဖန်တီးမှုရှာကြသည်ကြောင့်အခြားဆုလာဘ်မှီအောင်လိုက်လော့။ သူတို့ပါဝငျရာအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များ ( "dysphoria") ကနေကယ်ဆယ်ရေး, ကြုံတွေ့ခဲ့ကြသောကြောင့်, အခြားသူများကပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဆုလာဘ်ကိုလိုက် "အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်။ " ဆုလာဘ်များနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ၏ကနဦးအတွေ့အကြုံများအပြင်အလုပ်မဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်ပစ္စုပ္ပန်စွဲအများစုကိစ္စများတွင်လည်းမရှိ ကြောင်းစွဲလမ်းအပြုအမူတွေနဲ့အတူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများ၏ဇွဲနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။
စွဲလမ်းမှု၏ပြည်နယ်မူးယစ်၏ပြည်နယ်ကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူး။ မည်သူမဆိုအရက်သို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်ပျော့မူးယစ်တွေ့ကြုံသောအခါ, သို့မဟုတ်တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောလောင်းကစားဝိုင်းသို့မဟုတ်အစာစားအဖြစ်အလားအလာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက် Non-ရောဂါဗေဒထိတွေဆက်ဆံမှုပြုလုပ်ပါကအခါ, တဦးတည်းကို "မြင့်သော" တွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါ, ဆုလာဘ်ဆားကစ်အတွက်တိုးမြှင့် dopamine နဲ့ opioid peptide လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ "အပြုသဘောဆောင်သော" စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်အဖြစ်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ထိုသို့သောအတှေ့အကွုံပြီးနောက်, ဆုလာဘ် function ကိုရိုးရိုးအခြေခံမှပြန်ပြောင်းပေမယ့်မကြာခဏမူရင်းအဆင့်ဆင့်ကိုအောက်တွင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်မတစ်ဦး neurochemical ပြန်တက်ရှိ၏။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်များသောအားဖြင့်သတိရှိရှိသိမြင်နိုင်သောမဟုတ်ပါဘူးနှင့်သေချာပေါက်အလုပ်လုပ်တဲ့ချို့ယွင်းနှင့်အတူဆက်စပ်ခြင်းမရှိပါ။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲတွေ့ကြုံမှုများသည်အစဉ်အမြဲတိုးမြှင့်သောဆုလိုင်းပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ လူတစ် ဦး သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောအပြုအမူများမှရုပ်သိမ်းခြင်းကိုခံရသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ဆေးဝါးဗေဒအတန်းအားလုံးနီးပါးမှရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်မတည်ငြိမ်သောစိတ်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သည်။ စွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများ။ သည်းခံစိတ်သည်“ မြင့်မား” သည်အထိတိုးတက်မှုရှိသော်လည်းမူးယစ်ခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းသံသရာနှင့်ဆက်နွယ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ“ အနိမ့်” ကိုသည်းမခံပါ။
ထို့ကြောင့်စွဲလမ်းမှုတွင်ပုဂ္ဂိုလ်များသည်မြင့်မားသောအဆင့်ကိုဖန်တီးရန်အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားသော်လည်း၊ အများအားဖြင့်သူတို့တွေ့ကြုံခံစားရသည်မှာပိုမိုနက်ရှိုင်းပြီးပိုမိုနက်ရှိုင်းသော“ အနိမ့်” ဖြစ်သည်။ မည်သူမဆို“ မြင့်” လိုသည်ဟုထင်ရသော်လည်းစွဲလမ်းနေသောသူတို့သည်သူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေသို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာခြင်း၏ဇီဝကမ္မလက္ခဏာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်စွဲလမ်းသောပစ္စည်းကိုအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားကြရသည်။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်“ ဆုများ” ကိုလိုက်စားခြင်းသည်ရှည်လျားသောအရာမဟုတ်ပါကစွဲလမ်းနေသူများသည်မခံစားနိုင်သော်လည်း၎င်းကိုအတင်းအကျပ်သုံးလေ့ရှိသည်။ (၅) မည်သည့်ယဉ်ကျေးမှုမှမဆိုလူတို့သည်တစ် ဦး မှတစ် ဦး“ မြင့်” ရန်ရွေးချယ်ပေမည် လှုပ်ရှားမှု, ကစွဲတစ်ခုတည်းကိုသာရွေးချယ်မှုတစ်ခု function ကိုမဟုတျကွောငျးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရရင်စွဲလမ်းမှုဟာလိုချင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူး။
စွဲနေတဲ့နာတာရှည်ရောဂါသည်အတိုင်း, လွှတ်၏ span ကြားဖြတ်ရသော relapse ၏ကာလ, စွဲလမ်းတစ်ဘုံအင်္ဂါရပ်ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှပြန်လာအသိအမှတ်မပြုဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်၏ရောဂါဗေဒလိုက်စားမလွှဲမရှောင်ဘူး။
လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်စွဲ၏သင်တန်းပြောင်းလဲအတွက်အတော်လေးထိရောက်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ relapse အပြုအမူတွေအဘို့အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များအပါအဝင်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အပြုအမူ၏အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရေး, အပြုသဘောလက်တွေ့ရလဒ်များအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်နှင့်တာဝန်ခံမြှင့်တင်ရန်ရသောလှုပ်ရှားမှုများ, အခြားသူများနှင့်အတူကွန်နက်ရှင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမှာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုလည်းပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ကူညီသည်။ ဒါဟာတည်းကကုသမှုမရှိဘူး left သို့မဟုတ်မလုံလောက်ကုသအထူးသဖြင့်လာသောအခါ, ထိုစွဲလမ်းမသန်စွမ်းသို့မဟုတ်အချိန်မတန်မီသေစေနိုင်သောအသိအမှတ်မပြုရန်အရေးကြီးပါသည်။
ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူစွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတုံ့ပြန်ထားတဲ့အတွက်အရည်အသွေးနည်းလမ်းများ့လင်းလင်းရည်ညွှန်းသိသာမကျမည်အကြောင်းအရာတိုးတက်မှု, ညွှန်ပြ, အစောပိုင်းကအဆင့်ထက်စွဲ၏နောက်ပိုင်းတွင်အဆင့်ဆင့်မှာကွဲပြားခြားနားပါသည်။ သည်အခြားနာတာရှည်ရောဂါများနှင့်အတူအမှုသည်အတိုင်း, အခြေအနေကိုဖို့အချိန်ကျော်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရမည်ဖြစ်သည်:
တစ်ဦး။ relapses ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချရန်,
ခ။ လွှတ်၏ကာလကိုဆက်ထိန်း; နှင့်
က c ။ လွှတ်၏ကာလအတွင်းမှာလုပ်ငန်းဆောင်တာများလူတစ်ဦးရဲ့အဆင့်ကိုပိုကောင်းအောင်။
စွဲလမ်း၏အချို့ကိစ္စများတွင်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုကုသမှုရလဒ်များတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ စွဲလမ်းအများစုကိစ္စများတွင်သက်သေအထောက်အထား-based pharmacological ကုထုံးနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ဖြစ်ပွားနေသောစောင့်ရှောက်မှု၏ပေါင်းစည်းမှုကိုအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုပေးပါသည်။ နာတာရှည်ရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှု relapse နှင့်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှု၏ဖြစ်စဉ်များ၏အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘို့အရေးကြီးပါသည်။ စွဲလမ်း၏ကုသမှုဘဝတွေကိုကယ်တင်†
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်စွဲပညာရှင်များနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များပြန်လည်နာလန်ထူမှာတွေ့ရှိသောမျှော်လင့်ချက်ငါတို့သိကြ၏။ Recovery ကိုအာရုံစွဲလမ်း၏ရောဂါမှကျန်းမာရေးအကျိုးဆက်များချိတ်ဆက်ပေါ်မှာအထူးသဖြင့်အခါ, ပင်ပထမဦးဆုံးမှာဒီမျှော်လင့်ချက်ရိပ်မိနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်များမှရရှိနိုင်ပါသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူအခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေများ, Self-စီမံခန့်ခွဲမှု, ၌ရှိသကဲ့သို့, စွဲလမ်းရာမှပြန်လည်နာလန်ထူ၌အလွန်အရေးပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသော "Self-အကူအညီနဲ့" လှုပ်ရှားမှုများတွင်တွေ့ရှိရကြောင်းအဖြစ် peer ထောက်ခံမှုကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ရလဒ်များအကောင်းဆုံးအတွက်အကျိုးရှိပါတယ်။ ‡
စွဲလမ်းရာမှပြန်လည်နာလန်ထူအကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကပံ့ပိုးမယ့် Self-စီမံခန့်ခွဲမှု၏ပေါင်းစပ်, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထောက်ခံမှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စောင့်ရှောက်မှုမှတဆင့်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ASAM ရှင်းလင်းချက်အောက်ခြေမှတ်ချက်များ -
1 ။ စွဲလမ်း၏ neurobiology နေဆဲစူးစမ်းလျက်ရှိသည်သော်လည်းဆုလာဘ်၏ neurobiology ကောင်းစွာဆယ်စုနှစ်များစွာနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ အများစုမှာ Clinician ဟာပျမ်းမျှ forebrain ဆော့ဝဲအစုအဝေး (MFB) မှတဆင့်, ဦးနှောက်၏ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) မှစီမံချက်များအပါအဝင်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏လေ့လာသင်ယူနှင့် dopamine အာရုံခံထင်ရှားတဲ့နေသောအတွင်းနျူကလိယ accumbens (NUC ACC), အတွင်းရပ်စဲပါပြီ။ လက်ရှိ neuroscience ဆုလာဘ်၏ neurocircuitry ကိုလည်းနျူကလိယ accumbens နှင့် Basal forebrain ချိတ်ဆက်ကြွယ်ဝ bi-directional circuitry ပါဝငျကွောငျးအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ဒါဟာဆုလာဘ်မှတ်ပုံတင်ရှိရာဆုလာဘ် circuitry ဖြစ်ပြီး, ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာ, ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့, လိင်နှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအဖြစ်အခြေခံအကျဆုံးဆုလာဘ်တစ်ဦးခိုင်နှင့်အသက်-တည်တံ့ခိုင်မြဲသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုရှိရာ။
အရက်, နီကိုတင်းသည်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူတွေကိုအလှနျအားဖြည့်ဥပမာ, အစားအစာနှင့်လိင်လုပ်ဦးနှောက်ထဲမှာပေါ်လာအတူတူပင်ဆုလာဘ် circuitry အပေါ်သရုပ်ဆောင်နေဖြင့်၎င်းတို့၏ကနဦးသက်ရောက်မှုကြိုးပမ်းနေကြတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဆုလာဘ်အနေဖြင့်မူးယစ်ခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Euphoria ပီတိကဲ့သို့သောအခြားဆိုးကျိုးများ, အကျိုးကို circuitry ၏ activation များမှဖြစ်ပါသည်။ မူးယစ်နှင့်ဆုတ်ခွာကောင်းစွာဆုလာဘ် circuitry ၏လေ့လာမှုမှတဆင့်နားလည်သဘောပေါက်ကြသည်နေစဉ်, စွဲလမ်း၏နားလည်မှုတစ်ခု forebrain နှငျ့ပတျသကျသောအာရုံကြောဆက်သွယ်မှု၏ကျယ်ပြန့်ကွန်ယက်ကိုအဖြစ် midbrain အဆောက်အဦများ၏နားလည်မှုလိုအပ်သည်။ အခြို့သောဆုလာဘ်, အရက်ကိုသုံးဖို့အချို့ဆုလာဘ်, အချို့ဆုလာဘ်ကိုလိုက်ရန်အစပျိုးခြင်းမှတုံ့ပြန်မှုများနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး drives တွေကိုနှင့်အတူအဆက်မပြတ်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရွေးချယ်ရေးနှင့် / သို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒသည်အခြားဆုလာဘ်ကိုရှာဆုလာဘ် neurocircuitry သူ့ဟာသူပြင်ပမျိုးစုံဦးနှောက်ဒေသများပါဝငျသညျ။
2. ဤအင်္ဂါရပ် ၅ ခုသည်စွဲလမ်းမှုရှိမရှိ၊ မဟုတ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်“ ရောဂါရှာဖွေရေးစံ” အဖြစ်အသုံးပြုရန် ASAM မှမရည်ရွယ်ပါ။ ဤအဝိသေသ features တွေစွဲအများစုကိစ္စများတွင်ကျယ်ပြန့်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြပေမယ့်, မခွဲခြားဘဲစွဲလမ်းတွင်တွေ့မြင်သောပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဆေးဝါးဗေဒသို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒ pursued သောဆုလာဘ်များ, အသီးအသီးအင်္ဂါရပ်တိုင်းအမှု၌အညီအမျှထင်ရှားတဲ့မည်မဟုတ်ပါ။ စွဲလမ်းမှု၏ရောဂါတခုလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးပြည့်စုံ, ဇီဝဗေဒစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, လူမှုရေးနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာအကဲဖြတ်လိုအပ်သည်။
ဤစာရွက်စာတမ်းတွင်“ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ” ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်အများအားဖြင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည့်အလေ့အကျင့်နှင့်စွဲလမ်းမှုအများအပြားအားဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကဲ့သို့ပင်စွဲလမ်းစေမှုထက်စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ဦး နှောက်ခန္ဓာဗေဒနှင့်ဇီဝကမ္မဗေဒသည်ဆေးစွဲမှုကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသည့်နောက်ခံအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤစာရွက်စာတမ်းတွင်“ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ” ဟူသောဝေါဟာရသည်စွဲလမ်းမှုအများအပြားတွင်ပေါ်ပေါက်နိုင်သည့်အလုပ်မဖြစ်သောသို့မဟုတ်လူမှုရေးအရမထောက်ခံသည့်အပြုအမူများကိုရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ မရိုးသားမှု၊ လူတစ် ဦး ၏တန်ဖိုးများကိုချိုးဖောက်ခြင်း (သို့) အခြားသူများ၏တန်ဖိုးများ၊ ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာအမှုများစသည့်အပြုအမူများသည်စွဲလမ်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအရာများကိုစွဲလမ်းစေမည့်အစားရှုပ်ထွေးမှုများအဖြစ်အကောင်းဆုံးရှုမြင်ကြသည်။
4 ။ အဆိုပါခန္ဓာဗေဒ (ပါဝင်ဦးနှောက် circuitry) နှင့် relapse ၏ဤသုံးပါးသည် Modes အတွက်ဇီဝြဖစ်စဉ်ကို (neuro-က transmitter ပါဝင်) (စိတ်ဖိစီးမှု-ဖြစ်ပေါ် relapse vs. cue-ဖြစ်ပေါ် relapse vs. drug- သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်-ဖြစ်ပေါ် relapse) မှ neuroscience မှတဆင့် delineated ပြီ သုတေသန။
အရက်အပါအ ၀ င်စွဲလမ်းစေနိုင်သောဆေးများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့်အစပျိုးခြင်းသည်နျူကလိယ accumbens နှင့် VTA-MFB-Nuc Acc neural axis (ဦး နှောက်၏ mesolimbic dopaminergic“ မက်လုံးပေးလွန်းမှုဆိုင်ရာပတ်လမ်း” ပါ ၀ င်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) ။ Reward မှဖြစ်ပေါ်သော relapse သည် frontal cortex မှနျူကလိယနျူကလီးယားသို့ရောက်ရှိနေသော glutamatergic ဆားကစ်များကကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ Conditions တွေကိုထိတွေ့ခြင်းဖြင့်အစပျိုး Relapse mesolimbic မက်လုံးပေး salience circuitry မှထုတ်လုပ်တဲ့အချိုမှုဆားကစ်, တိုကျရိုကျ cortex အတွက်မူလက insula, hippocampus နှင့် amygdala ပါဝငျသညျ။
စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများမှထိတွေ့မှုအားဖြင့်အစပျိုး Relapse ကောင်းစွာ endocrine စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်၏အဓိကအဖြစ်လူသိများသော hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးကျော်လွန်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်ပါဝငျသညျ။ ဤအ relapse-ထွက်လာပါတယ်ဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်နှစ်ခုရှိပါတယ် - တ hypothalamus, နျူကလိယ accumbens, တိုကျရိုကျ cortex, နှင့် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယမှ noradrenergic နျူကလိယကဦးနှောက်ကို stem ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက် tegmental ဧရိယာ၌ A2 နှင့်စီမံကိန်းများတွင်အစပြုနှင့် norepinephrine ကိုအသုံးပြုသည် ယင်း၏ neurotransmitter အဖြစ်; အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယထဲတွင်အခြားအမူလအဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယမှမှန်းချက်ရဲ့နှင့်၎င်း၏ neurotransmitter အဖြစ် corticotrophin-releasing အချက် (CRF) ကိုအသုံးပြုပါတယ်။
(ဤ ASAM အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြချက်၏တိုတောင်းသောဗားရှင်းတွင်ဖော်ပြထားသော) ဆုလာဘ်သည်ရောဂါဗေဒလိုက်စားခြင်းဖြင့်အစိတ်အပိုင်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်အကျိုးခံစားခွင့်ပမာဏ (ဥပမာမူးယစ်ဆေးဝါးသောက်သုံးသောပမာဏ) သို့မဟုတ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုပမာဏ၏ကြိမ်နှုန်းသို့မဟုတ်ကြာချိန်ပမာဏနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ စွဲလမ်းမှုတွင်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများကြောင့်စုဆောင်းမိသောဘဝပြproblemsနာများရှိသော်ငြားလည်းအပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်မှုသည်ပျော်စရာမကောင်းတော့ပေ။ အလားတူစွာပင်စွဲလမ်းမှု၏အစောပိုင်းအဆင့်များ၌ (သို့) အပြင်ပန်း၏သရုပ်သဏ္manifestာန်များသည်မထင်ရှားမီကပင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများတွင်ပါဝင်ခြင်းသည် dysphoria မှသက်သာရာရစေရန်ကြိုးပမ်းနိုင်သည်။ ရောဂါ၏နောက်ပိုင်းအဆင့်များတွင်အမူအကျင့်အားဖြင့်သက်သာမှုမပေးနိုင်သော်လည်းစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်မှုသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။
သုတေသီများသည်ပျော့ပျောင်းသောသိပ္ပံပညာ၏ရလဒ်များကိုအလွန်အမင်းခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းဖြင့်သုတေသီများတွေ့ရှိရသည် - အမေရိကန် - အဆိုးဆုံးပြစ်မှုကျူးလွန်သူ (2013)